बिद्यार्थीलाई मोवाइल किन ? | Hamro Patro
बिद्यार्थीलाई मोवाइल किन ?
प्रायको हातमा दुई दुई वटा मोवाईल फोन हुन्छन, एउटा फोन गर्ने मोवाईल अर्को नेट इन्टरनेट चलाउने मोवाईल ।
नेपालमा केहि बर्ष यता सञ्चारको तिव्र रुपमा विकास र विस्तार भएको पाइन्छ। करिव ५ बर्ष पहिले कुनै एउटा घरमा एउटा मोवाईल फोन थियो र कुनै परिवार को साथमा मोवाईल फोन नै थिएन । तर अहिले वन , घाँस , दाउरा , मेलापात , गोठाला , खेताला , विद्यार्थि , किसान , मजदुर श्रमिक , कर्मचारी , शिक्षक , वुद्दीजिवी, व्यापारी र सर्वसाधारण जनता सवैको हात हातमा र पाकेट पाकेट मा मोवाईल फोन हुने गरेको र भएको कुरा हामि सवैलाई स्पस्ट थाहा नै छ। अडियो गित , भिडियो , चलचित्र , आलार्म , भ्वाईस रेकर्ड , देखि नेट इन्टरनेट मा विचित्र संसार र विश्वका नविनतम गतिविधि हरु थाहा पाउन र जान्न अनि वुझ्न र सिक्नकै लागी पनि मोवाईल फोन को प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । वर्तमान नेपालका ७७ वटै जिल्ला अथवा सात वटै प्रदेशमा मोवाईल नेटवर्क र इन्टरनेट को पहुँच सहज रुपमा पुग्न सकेको छैन। मोवाईल| फोन एउटा यस्तो चिज वा साधन हो , जुन साधनको सहि प्रयोग र सदुपयोग गर्न सकियो भने सकरात्मक परिवर्तन लाई हरवखत साथ दिन्छ। टाढा रहेका आफन्तजन , साथिभाई हरुसंग मिठा मिठा सम्झना का कुराकानि गर्न , वचनले गर्नुपर्ने कामहरु र घण्टामा हुने काम मिनेटमै गर्न गराउन र जानकारी पाउन अनि दिन मोवाइल फोनको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ। मोवाईल फोनमा फोन कलका लागि सिम कार्डको प्रयोग गरिन्छ जसले गर्दा नै कुराकानि गर्न मिल्ने गर्दछ। नेपालमा नेपाल टेलिकम , एनसेल , हेलो नेपाल , स्मार्ट कल लगाएतका सिमकार्ड हरुको प्रयोग गरिन्छ , तर नेपालका सवै जिल्लाका सवै ठाँउमा नेटवर्क उपल्व्ध छैन । तर पनि त्यहा मोवाईल फोन को प्रयोग भिडियो अडियो सुन्न र हेर्न , अलार्म , भिडियो र अडियो रेकर्ड गर्नकै लागि होस या फेसनकै लागि होस प्रत्येक विद्यार्थि र अभिभावक संग साथमा मोवाईल फोन हुने गर्दछ ।
अलि विकसित जिल्ला र सहर अनि सदरमुकाम को त कुरै नगरौ होला , त्यहा त प्रायको हातमा दुई दुई वटा मोवाईल फोन हुन्छन, एउटा फोन गर्ने मोवाईल अर्को नेट इन्टरनेट चलाउने मोवाईल । दुई दुई वटा मोवाईल फोन हुने मा प्राय गरि विद्यार्थि साथि हरु पनि हुन्छन । फेसन भैसकेको छ मोवाईल फोन त्यहा नक्कल भईसकेको छ मोवाईल फोन किन हुन्छ आखिर ? किन गर्छौ आखिर ?? सहि सदुपयोग भयो भने मालामाल जिन्दगि वनाईदिने यो मोवाईल फोन को गलत प्रयोग भयो भने जिन्दगि वर्वादि र वेइज्जतिमा लैजाने गर्दछ । मोवाईल फोन को गलत प्रयोग स दुरुपयोग प्राय गरि विद्यार्थि साथिहरुले नै गर्ने गरेको कुरा हामि सवैलाई अपरिचित र अनौठो कुरा हुन सकिदैन र होईन । मोवाईल फोन को गलत प्रयोग प्राय गरि सहरी ईलाका , सदरमुकाम , विकसित ठाँउ , वा नेट इन्टरनेट को पहुँच र उपलव्धता भएको ठाँउमा रहेका विद्यार्थि साथि हरुले गरेको कुरा हामिले सुन्ने गर्दछौँ । मोवाईल फोन को कारणले र मोवाईल फोन ले गर्दा नै कति विद्यार्थि साथि हरु मायाँ प्रेम को जालमा फस्ने गर्दछन अनि पढाइ र वावु आमाको सपना र चाहाना लाई भुलिदिने गर्दछन । फेसन , स्टाइल र कम्पोटिसन को रुपमा रहेका नेट इन्टरनेट सामाजिक सञ्जालमा सवै खालि समय व्यर्थ र उपल्वधिविहिन रुपमा बिताउने विद्यार्थि साथि हरु लाई के थाहा आफ्नो भविष्य को असरको वारेमा ! बाबु आमाले गरेको दुख र संघर्ष के थाहा तिनि हरुलाई ! वास्तवमा मोवाईल फोन कै कारण कमजोर हुने हरु पनि हाम्रो जानकारी मा धेरै नै आउने गरेको पाइन्छ । मोवाईल फोन नभइ के विद्यार्थि जिवन असम्भव र अकल्पनिय हुने थियो होला र ?? सोचौ विद्यार्थी साथि हरु सोचौ एकपटक आफ्नो सुन्दर भविष्यको कल्पना गरौ मोवाईल फोन को गलत प्रयोग ले तपाइ हरुको त्यो उज्वल र सुन्दर भविश्य माथि दाग लाग्न र हानि हुन नदिओस । विद्यार्थी साथिहरु ! एकपटक अवश्य सचेत होऔ मोवाईल फोन देखि, यसको सहि सदुपयोग गर्न सकेमा विद्यार्थी साथिहरुले घर वाटै आफ्ना कक्षाका साथि हरु तथा कक्षा शिक्षक संग नजानेका र नवुझेका विषयवस्तु हरुको छलफल, सल्लाहा , सुझाव र परीमर्श गर्न सक्छन । भने नेट ईन्टरनेट बाट नयाँ नयाँ र खोजमुलक विश्वका नविनतम जानकारी प्राप्त गर्न र ज्ञान लिन सक्छन । विश्वमा दिनदिनै नयाँ नयाँ र अनौठा आश्चचर्यजनक अनि रोचक र चाखलाग्दा बिषय तथा घटनाहरु घटिरहेका र चलिरहेका हुन्छन ति सवैको ज्ञान र जानकारी मोवाईल फोन बाट नै पाउन सकिन्छ । आफुभन्दा टाढा रहेका आफन्तजन हरु, साथिभाई हरु , स्टमित्र, छरछिमेक र मान्यजन हरुलाइ संगै भएको महसुस गराउन सक्ने एक यन्त्र हो मोवाईल फोन । फेसवुक , ट्विटर , जिमेल, गुगल, युटुव , आदि सामाजिक सञ्जाल हरुबाट विश्वका नयाँ नयाँ गतिविधि र घटना अनि आफ्ना आफन्तजन , स्टमित्र , साथिभाई , मान्यजन र गुरुवर्ग आदि सवैका कार्यकलाप र गतिविधिको बारेमा जानकारी पनि मोवाईल फोन बाट नै पाउ सकिन्छ । हाम्रो समाज के भनौ देशैभरी नै यो सामाजिक सञ्जाल 'फेसवुक' पनि फेसन , स्टाइल र आधारभुत आवश्यकता नै ठान्ने र सोहिअनुसार प्रयोग गर्ने गरेको कुरा हामी प्राय सवैसामु थाहा भएकै होला ।
टाढा टाढा का मान्छेलाई फसवुकमा साथि वनाउने र कुरा गर्ने अनावश्यक चर्चा चलाउनाले र युवायुववति विच प्रेम सम्वन्ध रहनाले पनि मोवाईल फोन को गलत प्रयोग भएको हुन्छ। सानै र पढ्ने उमेरमै मायाँ प्रेम को जालमा फस्नु र पढाई प्रति ध्यान नजानुको मुख्य कारण र चालक पनि मोवाईल फोन नै हो । विद्यार्थी साथिहरुले दिउँसो भेट भएको समयमा कुनै एकले अर्कोलाइ मन पराउँछन , नाम मोवाईल फोन को नम्वर साटासाट गर्छन अनि साँझ पढ्ने समयमा फोनमा अनावश्यक गफ गरेर पढाई बर्वाद हुने गर्छ । विशेषः त मोवाईल फोन लाई र सामाजिक सञ्जाल फेसवुक लाई साथिहरुले फेसन ,स्टाईल र आवश्यकताका रुपमा लिनाले र गलत समयमा र धेरै हरुको बारेमा ज्ञान प्राप्त गर्न र सहि समयमा सहि प्रयेग र उपयोग गर्न सक्ने विद्यार्थी साथिहरुका लागी मोवाईल फोन उपयुक्त हुन्छ । मोवाइल फोन मा हिसावकिताव गर्नको लागि क्याल्कुलेटर समेय रहेको हुन्छ , जसले गर्दा विद्यार्थी साथि हरुलाइ सहज हुन्छ । आखिर यति उपयोगि साधन वा यन्त्र को दुरुपयोग किन गर्छौ त हामी ? मोवाइल फोन को सहि सदुपयोग गर्न किन सक्दैनौँ त हामी ? खास मा मोवाइल फोन को दुरुपयोग र गलत प्रयोग गर्नेमा हामि विद्यार्थी हरु नै किन अगाडि देखिन्छौँ त ? यहाँ निर यउटा गम्भिर प्रश्न खडा हुन्छ । जवाफ जरुरी छ , विद्यार्थी साथिहरु बाट कि किन यसो हुन्छ , किन यसो भईरहेको छ , हामि किन यसो गर्छौँ र हामि नै किन मोवाइल फोन को दुरुपयोग र गलत प्रयोग को मालिक किन वन्छौँ त ? किन मोवाइल फोन को दुरुपयोग र गलत प्रयोग को दोष हामि विद्यार्थी लाई नै लगाइन्छ त ? ब्यर्थमा दोष लगाउने भए त किसान लाइ लगाउदाहुन , मजदुर लाई लगाउदाहुन , श्रमिक लाई लगाउदाहुन , शिक्षक लाई लगाउदाहुन सवैलाई लगाउदाहुन त ? फेरि विद्यार्थी लाई मात्र दोष लगाउने तर अऱुलाई नलगाउने भन्ने होइन । उनिहरुले गल्ति नै गर्दैनन भने कसरि दोष लगाउने ? यसरि उनिहरुले गल्ति नै गर्दैनन भन्ने हुदैन । कम ले मात्रै गर्छन जसले गर्छन उनिहरुलाई दोष चाँही लगाईन्छ । विद्यार्थी जहिले आफ्नो र देशको भविष्य निर्माता र कर्णदार अनि निर्माण गर्दै गरेका सिकर्मि र डकर्मि हुन किनकि उनिहरुले अहिले संघर्ष र दुःख गरेर भविश्यमा खुसी र सुःखी रहनु पर्छ र हरेक सन्तानका बावु आमाले पनि चाहाना
पनि राखेका हुन्छन कि मेरो सन्तानको भविष्य सुःखी होस भनेर। तर सन्तान वा विद्यार्थी हरुले वुझिरहेका हुदैनन । यसो त सवैले वनबुझ्ने होईन , कुनैकुनै विद्यार्थी हरुले आफ्नो भविष्यको राम्रो ख्याल गर्छन र सोहि अनुसार वर्तमानमा संघर्स गर्छन कि उनिहरुले मोवाइल फोन को दुरुपयोग गर्दैनन र गलत प्रयोग पनि गर्दैनन विशेषता प्राप्त हुने हदसम्म सहि र सफल प्रयोग गर्छन र विशेषता लाभ लिन्छन । मोवाइल फोन भित्र हुने सवै चिज हरु को प्रयोग र उपयोग गर्न जाने पछि कुनै नराम्रो र प्रयोग गर्न नमिल्ने हुदैनन तर प्रयोग गर्न नजाने सवै अनुपयोगि हुन्छन अन्तत मोवाइल फोन नै अनुपयोगी हुन्छ । कसैको गित सुन्ने वानि हुन्छ तिनिहरुल पढेर विच विचमा गित सुनेर आन्नद लिन सक्छन । एफ एम रेडियो बाट नयाँ नयाँ रोचक र ज्ञानमुलक सामाग्री सुनेर आनन्द लिन सकिन्छ । कसैलाई बेलुका त्यति पढ्न मन नलाग्ने हुन सक्छ त्यसैले बिहान उठेर पढने भन्ने गर्छन तर बेलुका त सुत्छन बिहान निन्द्रा बाट बिउँझिदैनन जसको लागि मोवाइल फोन मा अलार्म को सहयता लिन सकिन्छ । मोवाइल फोन मा टर्चलाईट पनि हुन्छ जसले गर्दा विद्यार्थी हरु लाई कहिलेकाँही बत्ती नभएको बेला र लोड सेटिङ्ग भएको बेला अत्यन्तै उपयोगि हुन्छ । नयाँ नयाँ र ज्ञानमुलक भिडियो र चलचित्र हेरेर पनि विद्यार्थी हरुले मोवाइल फोन को विशेषता प्राप्त गर्न सक्छन । कक्षामा पढेका कुरा नजानेमा वा नवुझेमा तरुन्तै साथि वा शिक्षक लाई फोन वा म्यासेज गरेर सोध्न सकिन्छ । यि हुन विद्यार्थी हरु लाई एउटा सामान्य मोवाइल फोन का गुण वा फाईदाहरु । एनरोड मोवाइल फोन बाट त विद्यार्थी हरुले झनै धेरै र रोचक अनि ज्ञानमुलक सामाग्रीहरु तथा फाइदा लिन सक्छन ।
एनरोड मोवाइल फोन मा त विभिन्न एप्लिकेसन हरु हुन्छन ति कुनै कुनै त विद्यार्थी हरु लाई पाठ्यपुस्तक को सहयोगि पुस्तक को रुपमा हुन्छन । नेट इन्टरनेट वाट नयाँ नयाँ र खोजमुलक ज्ञानबर्दक सामाग्री बाट विद्यार्थी हरुले मनज्ञ लाभ लिन सक्छन । नेपालको हालको परिवेश अनुसार कक्षा १०/११ देखि माथि का प्राय सवै विद्यार्थी को हात हातमा मोवाइल फोन रहेको पाईन्छ । बिगत दुईचार बर्ष यता बिद्यार्थी हरुका लागी मोवाईल फोन र नेट ईन्टरनेट यस्तो नसा र लत भईसकेको छ कि मानौ कुनै लागऔसत नै हो । मोवाइल फोन सदुपयोग र प्रयोग नसा र लतको रुपमा लिन सके कति राम्रो हुने थियो होला तर आजकल का बिद्यार्थी हरु गलत प्योग गरि नसा को रुपमा लीन्छन । मोवाइल फोन बिना छटपट र आतुर हुन्छन एक्लो महसुस गर्छन । आखिर किन यस्तो गर्छन त? भित्री कारण र रहस्यहरु यस्ता छन। मायाँ प्रेम मा फस्नु सबैभन्दा ठुलो कारण बन्न पुगेको छ । कुनै दुई केटाकेटी को बिच मोवाइल नम्वर मागि फोनमा कुरा गर्दागर्दै प्रेमको अनुभुति गर्छन । जसले गर्दा पढाई र भविष्य भुलीदिन्छन । यदि उनिहरुसंग मोवाइल फोन हुँदैनथ्यो भने त यो सवै असम्भव हु्थ्यो । कुनै केटाकेटी ले कसैलाइ मनपराउँछन र मोवाइल नम्वर पत्ता लगाएर फोन मा व्स्त हुन्छन उसको मन जित्न को लागि जसले गर्दा उनिहरुको पैसा समय भविष्य र पढाई बिग्रियको पत्तो नै पाउँदैनन । चलचित्र प्रेमिहरु एकोहोरो चलचित्र हेरिरहने गर्छन समयको ख्याल गर्दैनन र पढाई र भविष्य वर्बाद हुन सक्छ । एकोहोरो चलचित्र हेरिरहने नसा ले नै मोवाइल फोन छोड्नै सक्दैनन।कसैलाई सोक र स्टाइल हुन्छ मोवाइल ।मोवाइल प्रति सोक र स्टाइल हुँदाहुँदै मोवाइल प्रेमी भइसकेका हुन्छन र खाली मोवाइल मै ध्यान दिन्छन र नसा को रुप मा लिन्छन । इन्टरनेट नेटवर्क को पहुँच भएका ठाँहरुमा बिद्यार्थी हरुलाई सामाजिक सञ्जाल फेसवुक , ट्विटर आदि नै पनि नसा भैसकेका हुन्छन । खाली मोवाइल मा फेसवुक ट्विटर चलाउने र अनावश्यक गफ गर्ने वानिले पनि पढाई मा डिस्टप हुने गर्छ ।
सहि प्रयोग गर्न सके त नेट इन्टरनेट वाट पनि असाध्यै धेरै खोजमुलक र ज्ञानमुलक जानकारि आउने गर्छन । त्यसैले बिद्यार्थीहरुले मोवाइल को गलत हैन सहि प्रयोग र उपयोग गरि नयाँ र ज्ञानमुलक जानकारी पाउन जरुरी छ । बिद्यार्थी हरुले मोवाइल फोन लाई नसाको रुपा नलिई ज्ञान वढाउने साधनको रुपमा लिन जरुरी छ । पढाई को समयमा बिद्यार्थी हरुले अनावश्यक र गलत कार्य मायाप्रेम लाइ मोवाइल संग जोड्नु हुदैन । र यो सोच्न जरुकि छ कि हामी हाम्रो कुःशल भविष्य निर्माणमा छौ र मोवाइल को गलत हैन सहि सदुपयोग गरे सफल हुन्छौ । अभिभावकले पनि बिद्यार्थी ले मोवाइल को गलत सदुपयोग गर्ने जस्तो भए मोवाइल नदिने र गलत प्रयोग गरेमा जफत गर्ने गर्नुपर्छ । मोवाइल किन्नुभन्दा पहिल अभिभीवकलेे बिद्यार्थी हरु को मानसिकता वुझ्नु जरुरी छ ।
लक्ष्मी पौडेल 'अनुरागी' चामुण्डा विन्द्रासैनि नगरपालिका १ भोर्लेनी दैलेख ।
हाल : सिद्दपाइला क्याम्पस सुर्खेेत बि बि एस प्रथम बर्षमा अध्ययनरत ।